A arịrịọ yiri mgbaaka | Apg29
A arịrịọ yiri mgbaaka
Ị ka gị ghọgburu na-aghọgbu?
Na otú anyị si mara na ọ bụ n'ezie a arịrịọ ndị na-akpọ na nwere ya ike? Ma eleghị anya, ọ bụ a ọma otu n'azụ.
Ụnyaahụ na-akpọ a Romanian m nwoke na-enweghị onyinye onwe ya. Ọ malitere ikwu ozugbo na agbajikwa Swedish, ma ka na-ezi ikpochapụ. Ma eleghị anya, ọ na-agụ tupu akwụkwọ.
Mgbe ọ bụla onye na-adịghị ekwu aha ya, m na-arịọ onye ọ bụ. Ma, o zaa ma aka iso-ekwu okwu. Ọ malitere na-agwa sob akụkọ banyere ya na ezinụlọ ya, ha bụ ndị na-arịa ọrịa kansa na e nwere n'ezie ike.
M ngwa ngwa ghọtara na nke ya na-arịọ maka ego. M jụrụ ozugbo ihe ọ kpọrọ wee a imebi ajị ajị omume a aha nke m ma ghọtara ma ọ nwere ike kpo. M jụrụ ebe o biri ndụ na a gwara Romania.
"Ị na-agha ụgha!"
Ị nwere ike n'ezie na Swedish, m kwuru, ma o kwuru na ọ bụ Romania. Ma cell ekwentị gosiri na ọ na-akpọ òkù site na Sweden. Ị na-akpọ si Sweden, m wee si, na aka iso: Ị na-agha ụgha! M wee sị Goodbye na eyịride elu.
The nwoke nwere kwuru na ọ bụ Kraịst, ma m na-ama mara ebe Romanian arịrịọ ọdụ n'èzí anyị na-echekwa ha kwuru na ha bụ ndị Kraịst na ndị òtù chọọchị dị iche iche na Romania, ma mgbe ọ nọ na-enyocha elu, ọ dịghị mgbe sued.
N'ezie, a Christian enyemaka ndị bụ ndị ogbenye na na mkpa, ma ọ bụrụ na ị chọrọ, ma atụla-acha anụnụ anụnụ-eyed na amaghị ihe, na-ekwe ka ha na-eji naanị n'ihi na ị bụ onye Kraịst na-achọ ibi ndụ a ndụ nsọpụrụ Chineke.
N'eziokwu, ọ bụ ezigbo ajụkwa-akpọ ụlọ na ndị na-ekwu Kraịst bụ ndị kwere na Jizọs na-arịọ, (ghọgbuo ha?) On ego. Ha na na eleghị anya surfed gburugburu net chọta mfe ịghọgbu Kraịst. M na mbụ natara ọgbaghara nke arịrịọ. Na otú anyị si mara na ọ bụ n'ezie a arịrịọ ndị na-akpọ na nwere ya ike? Ma eleghị anya, ọ bụ a ọma otu n'azụ.
Ọ dịghị ka telemarketers
Na mbụ, m nwere ike oge si enweghị ka telemarketers onye chọrọ foist m ihe. M mgbe obi na-adịchaghị mma mgbe ha na-eche bụ na m ihu ọma m nzuzu na-adịghị aghọta na ha na ngwaahịa na-ụwa ohere na m nnọọ ike enweteghi ihe. Na m ka m kwenye na zụta otu n'ime ha, m mesịa obi ghọgburu.
Ma ugbu a, m na-ekwu kpọmkwem ihe ndabere ọ bụla na m na-enweghị mmasị. Ma ha na-anọgide sina ka okwu na-agbalị ka m kweta, m kwụsị ozugbo na a siri ike enyi na enyi goodbye na kokwasịrị elu. M na-adịghị enye ha ohere.
Na mbụ, a nyere m a ọjọọ akọ na uche, ma ọ bụghị ọzọ n'ihi na m na-aghọta na ọ bụ m bụ ndị ga na-erigbu na-ata ahụhụ. M na-esikwu ike na nwere ọtụtụ ihe obi ike na-ebili ka a ụdị ihe.
Ya mere, ị ga-anwa anwa na-ekwu enweghị. Ekwela ka onye ọ bụla mee ka ị na-eche ala mgbagwoju mgbe ị na-ekwu ọ bụla. Guzosie ike mkpebi gị na-akwa nkwenye na n'atụghị egwu. Adịghị na-eji. Na ị bụ onye Kraịst ọ dịghị abụ obere Christian, ma ọ bụrụ na ị na-asị na ọ dịghị.
Nye ha Jesus!
Ma olee otú anyị na-eme na ha na-arịọ maka ego? Ke akpa itie anyị ga-enye ha na ozioma nke Jizọs mere na ha nwere ike inweta Ya-azọpụta na-azọpụta maka mgbe ebighị ebi. Ma ọ bụghị ya, ha ga-enweta ụfọdụ iji na ndụ ha.
Ke akpa itie, anyị ga-enye ndị arịrịọ Jesus! M na-ekwu ya ọzọ: Ke akpa itie, anyị ga-enye ndị arịrịọ Jesus! Ọ bụ mgbe ahụ nwere ike ha pụọ ​​ná beggary! Mgbe ahụ ị pụrụ inyere ha aka mmadụ.
Ọ bụ na Jizọs, mgbe ahụ, na-elekọta mmadụ enyemaka adịghị arụ ọrụ! Ya mere, ị ga-ebu ụzọ na-enye ha Jesus, na mgbe ahụ na-elekọta mmadụ-enyemaka!